'राजनीतिमा इमान्दारीताको खाँचो छ' | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ आश्विन २६ गते ०४:४८
लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष ङिमाछिरी लामा
तपाईंले ४ वर्षको अवधिमा घोषणा गरेका कति काम सम्पन्न गर्नुभयो ?
मैले यो अवधिमा निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छु । साविकको भकान्जे गाविसको नौवटा वडालाई हाल एउटा वडा बनाएर लिखुपिके गाउँपालिका ५ नम्बर बनाईएको हो । भौगोलिक हिसाबले यो वडा लिखुपिके गाउँपालिकाकै सबैभन्दा ठुलो वडा हो । यो वडामा बसोबास गर्ने जनसंख्या पनि छरिएर रहेका छन । शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्दा होस्टेल सहितको चन्द्रज्योति माध्यमिक यो गाउँपालिकाकै पहिलो हो । होस्टेल वडाको बजेटबाट बनेको त होईन । तर वडाको अगुवाइ तथा पहलमा होस्टेल संचालन गरेका छौँ । होस्टेल बनाउने सम्झौतामा भने केही रकम यो वडाले पनि सहयोग गर्ने भनेका थियौं । तर पछि होस्टेल बनाउने स्टेएट स्कुल नामक सँस्थाले नै सबै लगानी गरेर बनायो । वडासँग समन्वय राम्रो भएको कारण उक्त सँस्थाले वडालाई धन्यवाद दिएको छ ।
यो वडाको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति कस्तो छ ?
हाम्रो वडामा छिरिङखर्क स्वास्थ्य एकाई, भकान्जे स्वास्थ्य चौकी र किन्जा स्वास्थ्य इकाई गरेर तीनवटा स्वास्थ्य सँस्थाहरु छन । छिरिङखर्क र किन्जा स्वास्थ्य ईकाइमा पहिलाई नै स्वास्थ्य भवनहरु थिए । त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरेका छौँ । तर भकान्जेमा भने स्वास्थ्य चौकीको भवन भएता पनि भूकम्पले असर पारेको थियो । हामीले संरचनाभन्दा पनि सेवा ठूलो कुरा हो भनेर पुरानो स्वास्थ्य चौकीको भवन नजिकै अर्को भवन बनाएर स्वास्थ्य सेवा अगाडी बढाईरहेका छौँ । मलाई लाग्छ सम्भवतः यो भवन गाउँपालिकाकै गुणस्तर भवन हो ।
सडक निर्माण कति भयो नि ?
म स्थानिय तहकाे वडामा निर्वाचित भएर आएपछि यस वडाभरीमा करिब १ सय किलोमीटर भन्दा बढी सडक ट्र्याक खोलिएको छ । केही ठाउँमा थोरथोरै ग्राबेल पनि गरिएको छ । भौगोलिक विकटता र पातलो बस्ती भएर एकदुई ठाउँमा सडक निर्माण हुन सकेको छैन । यहाँका जनताको पहिलो माग नै सडक निर्माण रहेको छ । ४/५ घर भएको र पाँच सय मिटर टाढासम्म पनि सडकको ट्र्याक खोलेका छौँ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका जोड्ने सडक लामाजुरा भञ्ज्याङ्सम्म पुगेको छ । अब ट्याम्ज्याङ र छ्याङतारे भन्ने ठाउँमा सडक पुर्‍याउनु छ । जम्माजम्मी ४ किलोमिटर जति मात्रै सडक खन्न बाँकी छ । मैले मेरो वडामा स्थानीयसँग राम्रो समन्वय गरेको छु । दीर्घकालीन विकासलाई ध्यानमा राखेर काम गरेको छु । ३/४ घर भएको र ४/५ सय मिटर मात्रै दुरी भएको ठाँउमा हालसम्म बाटो पुगेको छ । यदि कुनै ठाउँमा बाटो नपुगेको भए वडामा मुद्दा हल्दा पनि हुन्छ् । अर्थात मिडिया वा जनतामार्फत बाहिर ल्याए पनि हुन्छ ।
हामीले एक घर एक धाराको योजना अगाडी बढाएका छौं । यो एकघर एकधाराको कार्यक्रम बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा प्राथमिकता दिएर काम सुरु गरेका छौँ । यसै वडाको छिरिङखर्क, पातल, भाकान्जे, मार्बु, सेटे, किन्जा आदि ठाउँमा खानेपानीको योजना पुगेको छ । यदि कुनै एकघरमा खानेपानीको धारा छुटेको रहेछ भने पनि मेरै पालामा पुर्‍याउनेछु ।
संचार क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
साविकाको भकन्जे गाविस वडा एक वा हालको लिखुपिके गाउँपालिका ५ अन्तर्गत छिरिङखर्कमा म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडी नै नेपाल टेलिकमको टावर थियो । म निर्वाचित भैसकेपछि छिम्बु भन्ने स्थानमा मोबाईल नेटवर्क स्थापना गरेका छौँ । गाउँपालिकामै दुईवटा टावर भएको वडा यही हो । त्यसकारण पनि यो वडा सञ्चार क्षेत्रमा अगाडी छ । छिरिङखर्कको टावरमा फोरजी जोड्ने तयारी गरिरहेका छौं । तर यो काम अलि झन्झटिलो र असजिलो काम हो । यसको लागि नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौमा निवेदन दिएर कार्यालय प्रमुखसँग पटकपटक बैठक पनि बसेका छौँ । पहिला विधुतको अवस्था र त्यसको रिपोर्ट पठाउनुपर्ने हुँदोरहेछ । त्यसपछि यहाँको पूर्वाधार तथा संरचनाले फोरजी राख्न मिल्छ मिल्दैन अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ । त्यो पनि हामीली गरिसकेका छौं । गत भदौमा फोरजीको लागि नेपाल टेलिकमकै केन्द्रिय कार्यालयमा गएर बैठक बस्यौं । अब चाडैं नै गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ । सबै क्षेत्रबाटो पहलकदमी भैरहेको छ ।
के यस वडाका सबैले विधुतको सुविधा पाएका छन् त ?
मेरै कार्यकालमा आफैंले विधुत उत्पादन गरेर आफ्नै वडामा सर्वसुलभ महशुल तिरेर जनताले विधुत उपभोग गरेको वडा सायदै यही होला । यस वडाको प्रायः सबै ठाउँमा विधुत पुगेको छ ।
समस्या केके छन् नि ?
छोटोमा समस्या भन्नुपर्दा जनताको आवश्यक धेरै छ तर स्रोतसाधन कम छ । तर पनि मेरो क्षेत्र अधिकारभित्र रहेको काम कर्तव्य म वडाको अभिभावक भएको नाताले समस्या समाधानका लागि सबै प्रकारको पहल गरेको छु । अलि बढी जसो आउने समस्या भनेको नागरिकता र जन्मदर्ताको हो । त्यो पनि कानुनसम्मत रही सम्बन्धित ठाउँमा समन्वय गरेर समाधान गर्ने गर्दछौं ।
केन्द्रीय राजनीतिको खिचातानी अथवा अन्य कार्यक्रमले वडा राजनीतिमा कत्तिको असर वा प्रभाव पार्दो रहेछ ?
केन्द्रीय राजनीतिले वडा तहको राजनीतिमा केन्द्रको भन्दा बढी असर प्रभाव पार्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । तर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएको देखिदैँन । हार अस्वीकार गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । राम्रोसँग सिस्टम बसेको छैन । बसेको भएपनि सिस्टम नमान्ने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा केन्द्रीय राजनीति, प्रदेश राजनीति, जिल्लाको राजनीति र स्थानीय तहको राजनीति कता जान्छ भन्ने कुरा नबुझ्नेहरुलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । राजनीतिमा इमानदारीताको आवश्यक हुन्छ । इमान्दारीताको कारण नै म निर्वाचित भएको हुँ । निर्वाचन अगाडि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका र मैले बोलेको कुरा सबै पुर्‍याएको छु । राजनीति भनेको जनतासँगकाे सम्बन्ध हो । सिद्धान्त र विचार आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । झन् स्थानीय तहमा राजनीति व्यक्तिगत व्यक्तित्वमा भर पर्छ । म उमेरमा सानो भए पनि व्यवहारमा परिपक्व छु । व्यवहारमा परिपक्व भएकै कारण छोटो समयमै राजनीतिमा फर्को मार्न सफल भएको छु ।
विशेष योजना केही छ ?
वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने, सडक, बत्ति र पानी नपुगेको ठाउँमा पुर्‍याउने, भएको सडकको स्तरोन्नति गर्ने नै अबको मुख्य योजनाभित्र पर्छ ।
पाँच नम्बर वाडाले कृषिमा दिएको छ कि ?
महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि धन्यवाद छ । स्थानीय तहको वडमध्यमा एक गाउँ एक उत्पादन गर्ने वडा भकान्जे नै हो । यहाँ चिया खेती छ । चिया खेतीमा झन्डै ६०/६५ प्रतिशत जनता जोडिएका छन । चियाखेतीका लागि गाउँपालिकाले डेढलाख अनुदान रकम छुट्यकेको छ । भौगोलिक बनावट अनुसार तल्लो भुभागमा बस्ने जनताहरु अलैंची खेतीमा जोडिएका छन । मौसम अनुकुल हावापानीलाई मध्यनजर गर्दै यस वडाले कृषि उत्पादनलाई पनि जोड दिएको छ ।
आगामी चुनावमा तपाईंको उम्मेदवारी हुन्छ कि ?
मेरो विचारमा चुनाव आउनु छ महिना अगाडी नै उम्मेदवार दिन्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने मान्छे काँचो हो । ताकि मेरो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त्यो अवस्थामा समय परिस्थितिले के देखाउँछ त्यही अनुसार अगाडी बढौँला ।
हरेक स्थानीय तहमा वडाको वस्तुस्थिति बुझेर मात्रै विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडी सार्नुपर्छ । म दीर्घकालीन विकासमा ध्यान दिन्छु । दीर्घकालीन सोच र योजनानुसार काम गर्छु । मेरा पालामा भएका कामहरू एकदुई सय वर्ष सम्म हुन भन्ने मेरो विचार हो । म बोलेर भन्दा पनि काम गरेर बोल्ने व्यक्ती हुँ ।